प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रियंकाको सुझाव : भोट पाउनेलायक काम गरेर त देखाउनुहोस पहिले – List Khabar
Home / समाचार / प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रियंकाको सुझाव : भोट पाउनेलायक काम गरेर त देखाउनुहोस पहिले
admin May 29, 2021 समाचार Leaveacomment 52 Views
काठमाडौ । सामाजिक संजालमा नायिका प्रियंका कार्की निकै सक्रिय छन् । उनका सामग्री अधिकांश विवादित र चर्चित हुन्छन् । उनले ब्यक्तिगत जिवनका विषय सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने भएकाले चर्चा हुने गरेको छ । तर अहिले भने प्रियंकाले नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा संजालमा लेखेकी छन् । उनले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै पहिले जनताको समस्या वुझ्न आग्रह गरेकी छिन् ।
प्रियंकाले लेखेकी छिन्–‘आखा खोलेर एक पटक नियालेर देशको स्थिती हेर्नुहोस् । अहिलेको समयमा देश र जनतालाई चुनाव चाहिदैन । यो अहिले प्राथमिकतामा पर्दैन । यति सामान्य कुरा पनि देख्न र वुझ्न नसक्ने ? देश हाक्ने शक्ती, देशलाई प्रगती र उन्नतीको मार्गमा लाने र इमान्दारी र जिम्मेवारीको साथ देश र जनताको सेवा र सुरक्षा गर्ने यो सरकारको दायित्व होइन र ?’
उनले, अहिलेको समयमा दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित बढिरहेको, अस्पतालमा बेड नभएको, भेन्टिलेटर नभएको, अक्सिजन नभएको, जनताले खोप नपाएको अवस्थालाई ध्यान दिन आग्रह गरेकी छन् । यस्तो अवस्थामा ४० अरब खर्च गरेर चुनाव गर्नु सान्दर्भिक नहुने भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् । उनले अगाडि लेखेकी छिन्–‘निषेधाज्ञा चलिरहँदा जनताले दुई छाक खान पाएका छैनन् ।
हामी नेपाल जस्तो संस्था र आदर्श मिश्रा जस्ता नागरिकले देशको हालत र परिस्थितीमा सुधार ल्याउन दिन रात खटिरहेका छन् । जुन काम खासमा यो सरकारको हो । अझै पनि आफूले आफूसँग नजर मिलाउन सक्छौ ए सरकार ? राती निन्द्रा राम्रोसँग त लाग्छ ? अहिलेको परिस्थिती वुझ्नुहोस् ।’
नायिका कार्कीले चुनावमा खर्च गर्ने भनिएको ४० अरव रुपैयाँ अक्सिजन सिलिन्डर, आइसीयू, भेन्टिलेटर, निःशुल्क खोप लगायतका बिषयमा खर्च गर्न आग्रह गरेकी छन् । नायिका कार्कीले जनता रहे मात्र देश रहने भन्दै चुनाव समय परिस्थिती ठिक भएपछि गर्न पनि सुझाव दिएकी छिन् । उनले चुनावमा भोटको आश गर्ने भए भोट पाउन लायक काम गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती पनि दिएकी छिन् ।
Previous गाउमा भेटिए क्षेत्रिनि आमाकि तामाङ्नि अचम्मका जुम्लिया दिदिबहिनी ,बिहे पनि एउटैसग गर्ने ,उतिकै राम्रा अनि यसरी खोले एकअर्काको पोल (हेर्नुस् भिडियो)
Next नारायणी अस्पताललाई मनिषा कोइरालाको भेन्टि’लेटरसहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग,,,,